» “माधव नेपालसँग मिल्न वामदेव ,गौतमले राखे यि ३ सर्त, माधव ,नेपाल ‘साथीहरुले मानेनन्’ भनेर पन्छिए, अब के गर्लान् गौतम ? “माधव नेपालसँग मिल्न वामदेव ,गौतमले राखे यि ३ सर्त, माधव ,नेपाल ‘साथीहरुले मानेनन्’ भनेर पन्छिए, अब के गर्लान् गौतम ? – हाम्रो खबर
“माधव नेपालसँग मिल्न वामदेव ,गौतमले राखे यि ३ सर्त, माधव ,नेपाल ‘साथीहरुले मानेनन्’ भनेर पन्छिए, अब के गर्लान् गौतम ?
2021, August 30th, Monday
हाम्रोखबर संवाददाता 324 Views
“काठमाडौ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष ,वामदेव गौतमले आफु अब नेकपा एमालेमा राजिनामा दिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी ,पार्टीमा जाने बताएका थिए । उनका पक्षका सांसदहरु माधव नेपाल पक्षमा गइसकेका छन् ।
“निर्वाचन आयोगमा सनाखतका लागि पुगेका गौतम पक्षका सांसदहरुले आधिकारीकता भने पाएनन् । नेपालले पठाएको केन्द्रीय ,समितीको नामावलीमा ति नाम समावेश नभएका कारण आयोगले सनाखत नगरेको हो । नेपाल पक्षको पार्टीमा जान गौतमले तीन सर्त अघि सारेका छन् ।
तर, वामदेवको उक्त प्रस्तावलाई अध्यक्ष नेपालले स्वीकार गरिसकेका छैनन्। बरु नेपालले, गौतमको प्रस्तावबारे पार्टीमा छलफल गरेको जवाफ दिँदै साथीहरुले अस्वीकार गरेको जवाफ दिएका छन्।
“उनले पार्टीमा दुई अध्यक्षको प्रावधान हुनुपर्ने पहिलो सर्त राखेका छन् । गौतमले अध्यक्ष र सह(अध्यक्षको प्रावधान हुनुपर्ने प्रस्ताव ,अघि सारेका छन्। त्यसमा सह(अध्यक्ष आफूलाई बनाइनुपर्ने पहिलो प्रस्ताव गौतमले राखेका छन्।
“यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, संसद बाहिरबाट मन्त्रिपरिषद् गठन र महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी चयन र केन्द्रीय ,कमिटीले पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव पनि गौतमले पठाएका सर्त हुन् ।
“माधव नेपाल भने अन्य सर्तमा सकारात्मक रहेपनि दुई अध्यक्षको प्रावधानमा भने सहमत नभएको बताइएको छ । उनले गौतमलाई आफुले ,गौतमको प्रस्ताव बैठकमा राखेको तर अन्य नेताहरुले नमानेको भनेर जवाफ दिएका छन् ।
“नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित एमाले उपाध्यक्ष भए पनि गौतम पछिल्लो समय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी भएका छैनन्। एमालेका महत्वपूर्ण बैठकमा सहभागी, नभएकाले गौतम माधव नेपालले गठन गरेको समाजवादीमा जान लागेको चर्चा भइरहेको छ। उनी आफै पनि आफ्ना केही सर्त पालना भए माधव नेपालको पार्टीमा जाने बताएका थिए ।
“नवगठित पार्टीमा गौतम आउने आशा अझै पनि नेपाल पक्षले गरे छ। पार्टी गठनकै दिन ट्वीट गर्दै समाजवादी पक्षले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको नाम राखेर ब्यानर सार्वजनिक ,गरेको थिए। तर, उक्त कुरामा गौतमले आपत्ति जनाएका थिए।